Kadmium: ayaa laga dhaxlaa kelyo iyo lafo xannuun - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kadmium: ayaa laga dhaxlaa kelyo iyo lafo xannuun
Kadmium oo dhaawacda kelyaha iyo lafaha
La daabacay fredag 18 mars 2016 kl 11.12
Haddii qaar badan oo bulshada ka mid ahi ey u wareegaan cunista khudradda un waxey bulsho badani ey halis ugu jiraan dhibaatooyin kala kelyaha iyo dhismaha lafaha oo xumaada.
Sbabaha keeni kara ayuu ka mid yahay iyada oo dhul badan oo khudradda lagu beero ay ku badan tahay maadada birta sunta ah ee lagu magacaabo kadmium.
Ugu yaraan 200 000 oo iswiidhish ah waxey maanta halis ugu jiraan inay oogadooda gasho tayo badan ee maadada birta sunta ah kadmium oo ey ka helaan khudradda, middaasina dhibaateeyso kelyaha iyo lafahooda, sida lagu sheegay war ka soo baxay hayadda cunnada Sweden - Livsmedelsverket.
Marie Vahter, waa caalimad ku takhasustay culuunta caafimaadka dabeecadda, waxayna ka howl-gashaa machadka Karolinska:
- Inkasta oo tallaabooyin badan la isku dayey sidii looga hor-tegi lahaa, haddana laguma guuleey-san in la yareeyo tirada bulshada sii kor-dheeysa e u wareegta cunista khudradda. Waa in marka lagu tallaabsado sidii loo dhimi lahaa tirada maadadaa ee ku jirta cunnada. Waxaan qabaa inay tahay midda ugu muhiim-san.
Habka ugu wanaag-san ee cunnada looga yareeyn karo maaddada kadmium ayaa ah iyada in joojiyo cunnada lagu beero nawaaxiyada Österlen ee gobolka Skåne, qeybo ka mid ah gobollada Östergötland iyo Jämtland.
Sida laga soo xigtay qariidadeeyn uu middaa ku sameeyay culimo uu ka mid yahay Jan Eriksson, oo wax ka baara maaddada kadmium, isla-markaana ka howl-gala jaamicadda beeraha ee Lantbruksuniversitet, SLU:
- Midda suurtagalka ah waxay tahay in aan haba-yaraatee waxba lagu abuurin dhulka ay maaddadaasi ku badan tahay, ama dhulka ey sida ba’an dhirtu uga soo dhuuqdo maaddada kadmium.